Qalabka Xariijinta Korantada, Fuse Cutout, Glass Insulator-Yongguang
WAA INAAN BIXINAYAA DHAMMAAN DHAQANADA
Tilmaanta: Heerarkayaga joogitaanka-fasalka ee heerarka sare ee dhammaan noocyada waxaa loo isticmaalaa hagaajinta fiilooyinka, iyo wixii kasta oo koronto ku shaqeeya ee jidadka tareenka iyo khadka gudbinta korantada. Usha joogteedu leh cimri dherer, qaab dhismeed adag iyo wax qabad fiican. Usha joogitaankeenna waxaa lagu daaweeyaa kuleyl u horseeda isku mid ahaanshaha qaabkeeda. Si fiican ayaa loo maareeyay oo waxay u adkaysan kartaa saamaynta heerkulka sare iyo cadaadiska si fudud. Usha joogistu waxay leedahay laba nooc oo waaweyn, kuwaas oo ah nooca qaansada iyo nooca tuubbooyinka. Nooc kasta oo joogitaan usha ah ayaa imaan doona ...
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. waa shirkad casri ah oo ku takhasustay wax soo saarka, R&D iyo iibka. Goobta Yongguang waxay ku taal caanka ah "Caadiga Korantada" ee Shiinaha-Yongnian, agagaarka 107 Wadada Qaranka, garoonka diyaaradaha ee Handan iyo xarunta tareenka.
Shirkadda waxaa la aasaasay 1995, waxaan nahay soo saare xirfad-yaqaanno ah oo ku shaqeeya Qalabka Korantada Korantada, gaar ahaan qadka dusha sare ee taamikada iyo is-xajinta waxyaabaha ku habboon, Qalabka Isku-xirka, Arrester, Xariga Fure Cutout, Qalabka Korantada sida gudbinta korantada iyo alaabada qaybinta. Warshadda ayaa leh dhul 8000m2 ah, oo leh in ka badan 200 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 40 farsamoyaqaanno xirfad leh.